Android vs iOS — Anycall Mobile
By Nyein Aung Htet October 21, 20192Mins Read
စမတ်ဖုန်း အသုံးပြူသူတွေကြားမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နှိုင်းယှဥ် ငြင်းခုန်လို့ မပြီးနိုင်မစီးနိုင်သေးတဲ့ ကိစွက‌တော့ Android နဲ့ iOS ဘယ်တစ်ခုက ဘယ်တစ်ခုထက် ပိုကောင်းကြောင်း ပါပဲ။ အခုအချိန်မှာ စမတ်ဖုန်း အသစ်တစ်လုံး ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း ‌Google ရဲ့ Android နဲ့ Apple ရဲ့ iOS ဆိုပြီး အဓိက ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။
ကဲ…ကျွန်တော်တို့လည်း ထပ်ပြီးတော့ အားသာချက် အားနည်ချက်တွေကိ နှိုင်းယှဥ် ငြင်းခုန်ကြည့်ရအောင်လားဗျာ…။
***တစ်ခု သတိချပ်စေချင်တာက အခုလို နှိုင်းယှဥ်တဲ့ နေရာမှာ Android ဘက်မှာလည်း မနေ iOS ဘက်ကလည်း မဟုတ်ဘဲ အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အတိုင်းလေး သူတို့န Software (OS) တစ်ခုအဖြစ် မြင်ပြီးတော့ ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်း မရှိဘဲ အကြမ်းဖျင်း နှိုင်းယှဥ်သွားမှာပါ။***
1. ဈေးနှုန်း (သို့) လူအများ တတ်နိုင်မှု
ဘယ်ဟာက ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းကောင်း လူအများစု လက်လှမ်းမီတဲ့ မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေဘူးလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ ဒီအပိုင်းမှာတော့ Android က အများကြီး သာပါတယ်။ Apple ဟာ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ရာမှာ အမြဲတမ်း မြင့်မားခဲ့တာပါ။ iOS တွေဟာ Apple ရဲ့ iPhones တွေမှာပဲ ပါဝင်တာ ဖြစ်တဲ့ အပြင် iPhones တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကလည်း အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်း ဖြစ်တာမို့ ဒီနေရာမှာ Android က သာတာကို ငြင်းနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။
Android ဖုန်းတွေ ကတော့ ဈေးနှုန်း အနည်းဆုံး သောင်းဂဏာန်းကနေစလို့ သိန်းဆယ်ချီပြီးရှိတာကြောင့် ဈေးနှုန်း အမျိုးမျိုး Brand အမျိုးမျိုး မိကြိုက်နှစ်သက်သလို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Android နဲ့ iOS နှစ်ခုလုံးမှာ Apps တွေ မရှိရင် ဘာမှလုပ်လို့ မရပါဘူး။ Applications တွေကို အ‌ရေအတွက်နဲ့ တိုင်းတာကြည့်ရင်တော့ Android Apps ပေါင်း 2.7 သန်း နဲ့ iOS Apps ပေါင်း 2.2 သန်းအထိ ရှိတယ်လို သိရပါတယ်။ အရည်အတွက်နဲ့ အရည်သွေးက တိုက်ရိုက် အချိုးမကျဘူးဆိုတာကို အားလုံးသိမှာပါ။ Professional Apps တွေဆိုရင် iOS မှာ Android ထက်ပိုပြီးတော့ များပါတယ်။ ပြီးတော့ Android Apps တွေမှာ ဗိုင်းရပ်ပါဝင်နိုင်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ iOS App တွေမှာတော့ အဲ့တာမျိုးတွေ အရမ်းကို ရှားပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ဂိမ်းတွေ နဲ့ တခြား Apps တွေ အသစ်ထွက်လာပြီဆိုရင် iOS က Android ထက်ပိုပြီးတော့ စောစောစီးစီးရလေ့ရှိပါတယ်။ ‌အကြမ်းဖျင်းပြောရရင်တော့ iOS Apps တွေက ပိုပြီးတော့ ကောင်းတဲ့ အပြင် လုံခြုံ စိတ်ချရတာကြောင့် ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
3. Alternative App Store
တစ်ဖက်မှာလည်း Android က Play Store အပြင် တခြား APK Pure လို Third-party Store တွေကလည်းနေရရှိနိုင်ပေမယ့် iOS Apps တွေကတော့ (Jailbrake မလုပ်ထားရင်) App Store တစ်ခုကတည်းကနေပဲ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Android မှာ စိတ်ကြိုက် ထည့်သွင်းနိုင်ပေမယ့် အခန့်မသင့်ရင် Virus နဲ့ တခြား ဖုန်းကို ဒုက္ခ ပေးနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တော့ ရှိပါတယ်။ iOS မှာတော့ သူ့ App Store တစ်ခုတည်းကနေပဲ Download ပြုလုပ်နိုင်တာကြောင့် ဒီနေရာမှာ Android က သာတယ်လို့ ပြောလို့ ရမှာပါ။
OS Updates တွေကို လျှင်လျှင်မြန်မြန် ပေးနိုင်တဲ့ နေရာမှာ Apple ရဲ့ iOS ကို ယှဉ်နိုင်မယ့်သူ မရှိသေးပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ လက်တစ်ဆုပ်စာ iPhone အမျိုးအစား‌အတွက် Update s ထုတ်ပေးဖို့က ရာပေါင်းများစွာသော Android ဖုန်းတွေ အတွက်တော့ ထက်ယှဉ်ရင် အရမ်းကို မြန်ဆန်လွန်းပါတယ်။
Android ဖုန်းတွေမှာ OS update အသစ်ရဖို့ OnePlus, Nokia နဲ့ အနည်းငယ်သော ကုမ္ပဏီ အချို့ကပဲ စွမ်းဆောင်နိုင်တာပါ။နောက်ဆုံး Features တွေနဲ့ Updates တွေမှာတော့ iOS က ပိုသာပါတယ်။
5. စိတ်ကြိုက် ပြုပြင်နိုင်မှု
ဒါကတော့ Android ရဲ့ အဓိက အားသာချက်လို့ ဆိုရမှာပါ။
Android ဟာ Open Source ဆိုတဲ့ အတိုင်း ချုပ်ချယ်မှုဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ လုပ်ချင်တာမှန်သမျှကို စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်။ iOS မှာတော့ Theme လေးပြောင်းဖို့ တောင် တော်တော်လေး အလုပ်ရှုပ်တာပါ။ ချုပ်ချယ်မှုတွေ အပြည့်နဲ့ပါ။ လွတ်လပ်မှု အပြည့်နဲ့ စိတ်ကြိုက် ပြုပြင်နိုင်မှုမှာတော့ Android က ပိုသာပါတယ်။
အထက်မှာ ပြောခဲ့ အချက်တွေ အပြင် တခြားသော အချက်တွေလည်း ကျန် ရှိပါသေးတယ်။ကျန်နေသေးတဲ့ အချက်လေးတွေနဲ့ တခြား အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း Comments မှာ ဆွေးနွေး သွားပါဦးဗျ…။
Author Nyein Aung Htet
Internet မလိုဘဲ Messages တွေပို့နိုင်တဲ့ Bridgefy ဆိုတာ…
Galaxy S21 Ultra Review : The Ultimate Flagship Phone ?
Mi 11 သို့မဟုတ် 2021 ရဲ့ ရွတ်သမျှ အကုန်ပါတဲ့ Feature Rich ဖုန်းတစ်လုံး
OnePlus Nord N10 5G Review : လူတိုင်းအတွက်သင့်တော်တဲ့ 5G Mid-range ဖုန်း??